Whiten သွားဖို့အခြေခံပြီးမူလစာမျက်နှာ | သွားလမ်းညွှန် Whiten ဖို့အကောင်းဆုံးလမ်းစဉ်
သူတို့သွားဘို့အရှည်လျားလူအတော်များများအဖြူခဲ့ကြ. သင်သည်သင်၏အံသွားအဝါရောင်လှည့်မည်မဟုတ်သေချာစေရန်လုပျနိုငျလုပ်ရပ်အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်. နောက်တဖန်အဖြူသင့်ရဲ့အံသွား Whiten ဖို့နည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်. ဤဆောင်းပါးသည်အဖြူကိုသင်အံသွားရတဲ့အတွက်မတူညီသောအကြံပေးချက်များလည်းပါဝင်သည်နှင့်အဖြူသူတို့ကိုစောင့်.
သင့်ရဲ့အံသွားစေ့စပ်သေချာစွာသွား regimen ၏နေအိမ် Whiten မသုံးခင်သန့်ရှင်းသေချာလုပ်ပါ. သငျသညျသူတို့အပျေါမှာလျှောက်ထားလျှင်ထုတ်ကုန် whitening အံသွားသင်နိန်မီက Whiten တဲ့အခါသင့်ရဲ့အံသွားသန့်ရှင်းရေးကြသည်မဟုတ် teeth.If ထို့နောက်ရလဒ်များကိုမညီမညာဖြစ်နေသောရိပ်ဖြစ်လိမ့်မည်လုံးဝစင်ကြယ်သောကပိုထိရောက်ဖြစ်လိမ့်မည်.
လူတိုင်းက Citrus အသီးအပွသိတယ်, လိမ္မော်သီးသို့မဟုတ်သံပုရာတူ, ဗီတာမင် C ကြွယ်ဝများမှာ, သင်မူကားသူတို့သည်သင့်အံသွားလည်းဖြူစေနိုင်သည်ကိုသိခဲ့ပါ? သင်ပင်တစ်သံပုရာခွံဒါမှမဟုတ်လိမ္မော်ရောင်ကိုသုံးနိုင်သည်, သင်ပြုရန်ရှိသည်အားလုံးကျောအစိတ်အပိုင်းဆန့်ကျင်သင့်ရဲ့အံသွားရဲ့မျက်နှာပြင်ကိုပွတ်သပ်နေသည်, သော sparkling မှသူတို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်. သံပုရာသို့မဟုတ်လိမ္မော်ရောင်၏အခွံပေါ်တွင်ဆားနည်းနည်းချပြီးအားဖြင့်, ရလဒ်တိုးတက်လာနိုင်.
အဖြူသင့်ရဲ့အံသွားကိုစောင့်ရှောက်ရန်ကြိုးစားနေသောအခါပထမဦးဆုံးအရေးကြီးသောအရာပရော်ဖက်ရှင်နယ်စင်ကြယ်၏. တိုင်းခြောက်လသန့်စင်သင့်ရဲ့အံသွား Get နှင့်အမြဲသင်သည်သင်၏လက်ရှိသန့်ရှင်းရေးမှာတဲ့အခါသင့်ရဲ့အနာဂတ်ရက်ချိန်းအချိန်စာရင်း.
ဆိုဒါမသောက်ခဲ့လျှင်, လက်ဖက်ရည်, ကော်ဖီသို့မဟုတ်မှောင်မိုက်သောစပျစ်ရည်, အဖြစ်ကောင်းစွာရေ SIP. ဤရွေ့ကားမဲမှောင်ဖျော်ယမကာသင့်ရဲ့အံသွားကိုရှုတ်ချပါလိမ့်မယ်, သူတို့မှန်မှန်မဖျက်ဆီးနေကြတယ်, အထူးသဖြင့်လျှင်. ဤအဖျော်ယမကာများ sips အကြားသင်၏နှုတ်၌လှည့်ပတ်ရေ sips Swishing အစွန်းအထင်းကိုဖြစ်ပေါ်နိုင်ကြောင်းမည်သည့်ကျန်ကြွင်းဖယ်ရှားပစ်ကူညီပေးနိုင်ပါသည်. ဤအဖျော်ယမကာစားသုံးပြီးနောက်, တတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးသင့်ရဲ့အံသွားတိုက်ဖို့သတိရပါ.
သင့်ရဲ့အံသွားသူတို့ရဲ့ whitest ရဖို့အနည်းငယ်လူသိများလမ်းအချို့သောအသီးအပွသုံးစွဲဖို့ဖြစ်ပါတယ်. အံသွား Whiten နိုငျသောမြတ်သောအသီးတစ်စုံတွဲဥပမာလိမ္မော်သီးနှင့်လိမ္မော်သီးများမှာ. သင်တို့သည်လည်းထိုသူတို့ Whiten ရန်သင့်အံသွားရဲ့မျက်နှာပြင်ဆန့်ကျင်နေတဲ့လိမ္မော်ရောင်အခွံပွတ်သပ်နိုင်.
သငျသညျကြားစားပြီးနောက်ကိုသုံးနိုငျသောသေးသေးလေးသွားပွတ်တံသယ်. ဤရွေ့ကားစားနပ်ရိက္ခာပစ္စည်းများအလွယ်တကူသင့်ရဲ့အံသွားကပ်, နှင့်အစွန်းအထင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုစတင်ဖို့သို့မဟုတ်အဲဒါကိုထည့်ပါ. မွှေးဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကုသပြီးနောက်, တိုက်အနည်းငယ်အချိန်လေးယူ. သင်သည်သင်၏အံသွားပွတ်တိုက်ပြီးတော့ကောင်းစွာသူတို့ကိုသုတ်လျှင်သွားတိုက်ဆေးမလိုအပ်.
သင့်ရဲ့သရဖူသင့်ရဲ့အံသွား၏ကျန်တူ Whiten ဘယ်တော့မှလိမ့်မည်. သင့်ရဲ့အံသွားလည်းဖြူရအဖြစ်သင့်ရဲ့သရဖူအတူတူဘဲရှိနေဦးမည်. ဒါကသရဖူ ပို. ပင်အရင်ကထက်ထွက်ရပ်လုပ်နိုင်.
ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့အံသွားအရောင်ပြောင်းဖြစ်လာစေနိုငျသောကွောငျ့သငျကပြား buildup ကာကွယ်တားဆီးဖို့လိုအပ်.
သငျသညျသကြားလုံးသို့မဟုတ်အခြားသကြားလုံးစားတဲ့အခါမှာအဘို့အပယ် stowed တစ်ဦးသွားပွတ်တံ Keep. ဤသူအစားအစာများကိုအလွန်အလွယ်တကူအံသွားကပ်သောကြောင့်, သူတို့ကအစွန်းအထင်းမြှင့်တင်ရန်နိုင်. အချိုချဉ်ခံစားပြီးနောက်, နှစ်ဦးသို့မဟုတ်သုံးမိနစ်ဖြီး. သငျသညျသွားတိုက်ဆေးရှိသည်ဖို့ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး, နေသမျှကာလပတ်လုံးသင်ကောင်းကောင်းအံသွားပွတ်တိုက်နှင့်ရေနှင့်အတူစေတနာစိတ်သုတ်အဖြစ်.
အော်ဂဲနစ်အုန်းသီးရေနံသင်တစ်ဦး mouthwash အဖြစ်အုန်းသီးရေနံကိုသုံးသင့်ရဲ့ teeth.If အဘို့ကြီးစွာသော whitening အေးဂျင့်အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်, အဲဒီအကြောင်း၌သင်တို့၏အံသွား Whiten နိုင် 10 တစ်နေ့လျှင်မိနစ်. အကြောင်းပြီးနောက် 10 မိနစ္မ်ား, သငျသညျပုံမှန်အားဖြင့်အလိုတခုတည်းအဖြစ်သင်၏နှုတ်ထဲကအသုတ်ခြင်းနှင့်ဖြီး. သငျသညျထက်လျော့နည်းပြီးရက်အနည်းငယ်အတွင်းအချို့သောရလဒ်များကိုကြည့်ရှုနိုင်.
တိုင်းအစာစားပြီးနောက်သင့်ရဲ့အံသွားနိန် discoloring ထံမှအခမဲ့သူတို့ကိုစောင့်ရှောက်ရန်ကူညီပေးပါမည်. သငျသညျကော်ဖီသောက်သုံးနေတဲ့အခါဒီအရေးကွီး၏.
တစ်ဦးအော်ဂဲနစ်အုန်းသီးရေနံသင့်ရဲ့အံသွား whitening မှပဲလက်မှတ်ဖြစ်စေခြင်းငှါ. အုန်းသီးကိုဆီသင့်ရဲ့အံသွားမယ့် 10-မိနစ်နေ့စဉ်လြျှောပေးခြင်းသည်သင်၏အပြုံး၏အဖြူရောင်အပေါ်အလွန်ကြီးစွာသောသက်ရောက်မှုများရှိနိုင်ပါသည်. ပြီးနောက် 10 မိနစ်ပြီ, သင်၏နှုတ်သုတ်ခြင်းနှင့်ပုံမှန်ကဲ့သို့သင်တို့အံသွားသန့်ရှင်းရေး. သင်တစ်ဦးရက်အနည်းငယ်ပြီးနောက်အချို့သောရလဒ်များကိုကြည့်ရှုသင့်ပါ.
သငျသညျကွီးစှာသောအပြုံးရှိပါကမှန်မှန်သင့်ရဲ့အံသွားတိုက်. စားနပ်ရိက္ခာနှင့်အခြားပစ္စည်းများသင့်ရဲ့အံသွားပေါ်တည်ဆောက်ရန်နှင့်သူတို့ကိုရှုတ်ချနိုင်ပါတယ်. သင်မှန်မှန်သင့်ရဲ့အံသွားတိုက်မယ်ဆိုရင်သင်သွားအရောင်ပြောင်းအကြောင်းဖဲ့ခြွေဖို့ရှိသည်မည်မဟုတ်.
ရေအစွန်းအထင်းဆန့်ကျင်တိုက်ပွဲတစ်ခုမရှိမဖြစ်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်တယ်. ဒါဟာသင့်ရဲ့အံသွားကိုပိတ်ထားသုတ်အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်အစွန်းအထင်းကာကွယ်တားဆီးဖို့နှစ်ဦးစလုံးသငျသညျကူညီပေးသည်. နေ့ရက်တိုင်းကိုသင့်ရေသုံးစွဲမှုတက်စောင့်ရှောက်ဖို့ကောင်းတစ်ဦးကကျန်းမာရေးအလေ့အကျင့်ကြောင့်ဖွင့်, အထူးသဖြင့်အသီးအသီးစားပြီးနောက်.
သင့်ရဲ့အံသွားအဖြူကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့, စင်ကြယ်သောကာစစ်ဆေးမှုများကိုတက်ဘို့မှန်မှန်သွားဆရာဝန်ကိုသွားမယ့်မဖြစ်မနေဖြစ်ပါသည်. ပုံမှန်ရှိခြင်းအဖြူသင့်ရဲ့အံသွားစောင့်ရှောက်ဖို့အလွန်ကြီးစွာသောနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်. သငျသညျတိုင်းခြောက်လအနည်းဆုံးသင့်ရဲ့သွားဆရာသွားရောက်သင့်ပါတယ်.
whitening သွားတိုက်ဆေးကိုသုံးပြီးသင်တို့အဘို့အရှာဖွေနေခဲ့ကြသောသူတို့သည်လည်းထို Pearly အဖြူအံသွားရဖို့အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်. ပွတ်တိုက်အားမှတဆင့်, အစွန်းအထင်းများနှင့် plaque ၏ဒီသွားတိုက်ဆေး rids. အချိန်ပို, ထိုအစွန်းအထင်းပျောက်ရန်စတင်သကဲ့သို့သင်တို့တောက်ပအံသွားရလိမ့်မည်.
ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ် whitening အံသွားအဘို့ဘေးကင်းလုံခြုံကုသမှုမသင့်. ဒါဟာအန္တရာယ်မကင်းသည်နှင့်သင့်အံသွားအရောင်ပြောင်းစေနိုင်ပါတယ်; သင်သည်လည်းနှစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောအရောင်အံသွားနှင့်အတူတက်အဆုံးသတ်စေခြင်းငှါ. ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ်ရှိကြောင်းဆိုထုတ်ကုန်ရှောင်ကြဉ်ပါ.
ကြွေအမြစ်ကူးစက်မှုအဖြစ်အံသွားကိုထိခိုက်စေနိုင်သည်ကိုအခြားအမှုအရာတားဆီးကူညီပေးသည်သောအကာအကွယ်ဓာတ်သတ္တုအလွှာအပေါ်သတ္တုဓာတ်၏အလွှာဖြစ်ပါသည်. ထုတ်ကုန် whitening တချို့ကသွားအပျက်သဘောသင့်ရဲ့အံသွားအဖြူရောင်ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်.
သင်သည်သင်၏အံသွားတိုက်ခြင်းနှင့် FLOSS အကယ်. တစ်နေ့လျှင်နှစ်ကြိမ်, သငျသညျဖြစ်နိုင်မကြာခဏဤအမှုကိုမပြုကြသောသူတို့ကိုနှိုင်းယှဉ်လျှင်လည်းဖြူအံသွားရလိမ့်မည်. ဤအမှုနည်းလမ်းများအသုံးပြုခြင်းသင့်ရဲ့အံသွား discolors သော plaque ၏အ buildup ဖယ်ရှားပစ်မည်. အသီးအသီးစားပြီးနောက်သင့်ရဲ့အံသွားတိုက်နှင့်လည်း FLOSS ဖို့ကောင်းတစ်ဦးစိတ်ကူးဒါဟာင်.
ဒီများစွာသောလူတို့အဘို့ဖြစ်စေခြင်းငှါသကဲ့သို့သငျခဲယဉ်းတဲ့ဖြူ smile.As ရရန်သင့်ကော်ဖီလျှော့ချဖို့ရှိသည်လိမ့်မည်, ကော်ဖီအရောင်ပြောင်းနှင့်စွန်းအံသွားဦးဆောင်အကြောင်းအရင်း. ပူပြင်းတဲ့ချောကလက်အစားကော်ဖီသောက်ရန်ကြိုးစားပါ.
သံပုရာနှင့်ထုံးရည်အတွက် Citrus ထိရောက်စွာသင့်ရဲ့အံသွား Whiten နိုင်သည့်မိန်းမအိုပုံပြင်ဖြစ်ပါသည်. လုံးဝပယ်ကုသမှုဒီနည်းလမ်းကိုမှနေဖို့ကောင်းတစ်စိတ်ကူးက.
သင်သည်မည်သည့် Whiten ဖြေရှင်းချက်မှသာသဘာဝကအံသွားပေါ်အလုပ်လုပ်သိသင့်. မဆိုအတုမျက်နှာပြင်များ, သရဖူအပါအဝင်, Bond, implants နဲ့တူအရောင်အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ. အံသွား Whiten အသုံးပြုခြင်းပါးစပ်တွင်းအလုပ်စေခြင်းငှါ, ထိုကဲ့သို့သောသရဖူအဖြစ်, သင့်ရဲ့သဘာဝကအဖြူအံသွားဆန့်ကျင်ထွက်ရပ်တည်ရန်.
သငျသညျကိုမှန်မှန်သွားတိုက်ဆေးနှင့် FLOSS နှင့်အတူအခြေခံသန့်ရှင်းရေးလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်အပေါ်ကျန်းမာသန်စွမ်းခြင်းနှင့်လည်းဖြူအံသွားရလိမ့်မည်. သငျသညျ FLOSS နှင့်မဝင်အဖြစ်မုန့်ဖုတ်ဆော်ဒါပါဝင်တဲ့ထုတ်ကုန်များအစွန်းအထင်းမဖယ်ရှားအတွက်ထိရောက်သောများမှာ.
၏ Citrus အသီးအပွသင့်ရဲ့ teeth.You လည်းအဖြစ်ကောင်းစွာ Citrus ဖျော်ရည်ကိုရှောင်ရှားသင့်ပါတယ်ဘို့အလွန်အကျွံအက်ဆစ်ရှိသည်နိုင်. ပါရှိသောအက်ဆစ်သင့်ရဲ့အံသွားအဘို့ကြောက်မက်ဘွယ်ဖြစ်ကြ၏. သငျသညျလညျးသငျညဘက်အိပ်ရှေ့မှာဤအစားအစာများကိုစားခြင်းမှရှောင်ရှားရန်လိုခငျြ, သူတို့အက်ဆစ် reflux မှခံစားမှသင်ပိုမိုဖွယ်ရှိပါစေသောကြောင့်,, ဒါ့အပြင်သင့်ရဲ့အံသွားကိုပျက်စီးစေနိုငျသော.
သင်သည်သင်၏အံသွား whitening အတွက်စိတ်ဝင်စားလျှင်, ပထမဦးဆုံးသင့်ရဲ့သွားဆရာစကားပြော. သငျသညျအံသွား whitening ရိုးရှင်းတဲ့အလှကုန်ပစ္စည်းသတိကြီးကြီးထားမဖြစ်. သင့်ရဲ့အံသွားကျန်းမာသေချာစေရန်မှန်မှန်သင့်ရဲ့ဆရာကိုသွားပါ. regimen whitening တစ်ဦးအံသွားအကြောင်းကိုသွားဆရာဝန်မှပြောဆိုရန်သေချာစေပါ.
အတူတူလိမ္မော်ရောင် peels နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အရွက်ကြိတ်အားဖြင့်တစ်ဦးအမှုန့်ဖြစ်စေခြင်းငှါ. ဒီအမှုန့်သင့်ရဲ့သွားပွတ်တံနှင့် sensitivity ကိုမှလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်.
သငျသညျကြိုတင်အစအဦးရန်သင့်သွားဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးဖို့သေချာပါ cavities.Make တူမဖြေရှင်းနိုင်ပါးစပ်တွင်းကိစ္စများရှိပါကမည်သည့်အိမ်သို့ whitening လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသင်တို့အဘို့အသင့်လျော်နေကြသည်ကိုသင့်အံသွား Whiten မနေပါနဲ့.
သူတို့သည်သင့်လည်းဖြူအံသွားပေးလိမ့်မယ်ဆိုကြောင်းသွားတိုက်ဆေးကိုကိုးစားမနေပါနဲ့. အများစုကသာအနည်းငယ်သင့်ရဲ့အံသွား Whiten, မှာအားလုံးမယ်ဆိုရင်, သငျသညျအဖြူအံသွားချင်တယ်ဆိုရင်သင်မူကားအခြားထုတ်ကုန်ကိုသုံးနိုင်သည်. သင်တစ်ဦး whitening သွားတိုက်ဆေးမဝယ်ပြုလျှင်, မုန့်ဖုတ်ဆော်ဒါများပါဝင်သည်တမဝယ်, ဒါကြောင့်အမှန်တကယ်ကူညီပေးနိုင်ပါသည်အဖြစ်.
ရှေ့တော်၌ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း, အဖြူအံသွားရှိသည်ဖို့လိုကွောငျးအများအပြားကွဲပြားခြားနားတဲ့လူရှိပါတယ်. အများစုကကွဲပြားခြားနားသောမဟာဗျူဟာများကိုသင့်အံသွား whitening နှင့်အဝါရောင်အစွန်းအထင်းဖျက်သိမ်းရေးအဘို့အအသုံးပြုသွားမည်နိုင်ပါသည်. သငျသညျရိုးရိုးကဒီမှာပေးအပ်သတင်းအချက်အလက်ကိုသုံးလျှင်သင်၏သွားတတ်နိုင်သမျှအဖြူရောင်အရှိနိုင်ပါသည်.
Whiten သွားလမ်းညွှန် Posted by ကို - ဇွန်လ 5, 2016 4:15 နံနက်
categories: Whiten သွားဖို့အခြေခံပြီးမူလစာမျက်နှာ Tags:: တောက်ပတဲ့အဖြူရောင်အပြုံး, သင့်ရဲ့အပြုံးခုနှစ်တွင်ယုံကြည်ပါတယ်, ပွုံးရယျ, အဖြူအံသွား